Boky famolavolana tena ilaina 5 ho an'ny mpianatra sy ny matihanina | Famoronana an-tserasera
Sarotra be ny mahita azy io tsara lisitra boky famolavolana izay tsy ahitantsika karazana amin'izy ireo amin'ny farany izay tsy fantatsika raha manana kalitao ampy ho an'ny tena ilaintsika izy ireo.
Noho izany dia hofintinintsika miaraka amin'ity lisitr'ireo boky famolavolana dimy ity izany izy ireo dia tsy maintsy manana. Toy ny efa fahita matetika amin'ity karazana boky ity dia tsy maintsy hitantsika amin'ny teny Anglo-Saxon ihany izy ity raha te hahazo torohevitra matihanina.
1 Thinking with Type avy amin'i Ellen Lupton
2 Grid Systems amin'ny famolavolana sary avy amin'i Josef Müller-Brockman
3 Fikarohana amin'ny typografikan'i Carolina de Bartolo
4 Ny fampifangaroan'ny loko nataon'i Josef Albers
5 Teoria amin'ny horonantsary sy fahatsapana horonantsary nataon'i Sergei Eisenstein
Mieritreritra amin'ny karazany avy amin'i Ellen Lupton
Lupton dia natokana hitondrana antsika boky izay tsara indrindra ho fantatra fandaminana ny litera amin'ny taratasy na ny efijery araka ny ilazantsika ny fototra ho an'ireo izay te hampihatra famolavolana. Karazan-tsoratra inona no tokony hampiasaina, ny habeny, ny fomba tokony hampifanarahana an'io litera, teny ary fehintsoratra ireto, ny baiko na ny fomba tokony hampiasaina.
Manome i Ellen Lupton torolàlana mazava sy fohy ho an'izay te hianatra na hanatsara ny fahaizany mitendry.
Grid Systems amin'ny famolavolana sary nataon'i Josef Müller-Brockman
Namboarina ho an'ireo izay hiasa amin'ny famolavolana lahatsoratra sy sary ho azy. Asehoy ohatra ny asa amin'ny ambaratongam-pahaizana. Boky iray izay azo ampiasaina amin'ny tetik'asa isan-karazany indrindra manomboka amin'ny takelaka telo-telo ka hatramin'ny rafitra manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 32.
Torolàlana ho an'ny mpampiasa izany manomboka amin'ny matihanina ka hatramin'ny asa.
Fikarohana amin'ny typografia nataon'i Carolina de Bartolo
Fanangonana ohatra betsaka amin'ny loharanom-baovao rehetra. Miaraka amin'ny specs sy ohatra voarindra tsara avy amina endritsoratra an-jatony, ity boky ity dia sanda lehibe sy loharano ho an'ny karazana hevitra typografika rehetra.
Boky izay mety ho miaraka amin'ny tranonkalanao ary ny fampiharana ho an'ny iPad sy iPhone. Loharanom-panentanam-panahy ho an'ny mpianatra sy ho an'ny matihanina amin'ity sehatra ity.
Ny fifandraisan'ny loko avy amin'i Josef Albers
I Josefl Albers dia iray amin'ireo artista fanabeazana manan-kery indrindra tamin'ny taonjato faha-1920 ary anisan'ny Bauhaus Alemanina tamin'ny taona XNUMX. Navoakan'i Albers tao amin'ity boky ity ny ankamaroan'ny fehinkevitra noraisiny avy amin'ny fampiharana fanandramana zavakanto izay nataony tany an-dakilasy niaraka tamin'ny mpianany.
Afaka mahita iray ianao fanehoana tsara ny tsy fitoviana izany dia mitranga eo amin'ny zava-misy ara-batana sy ny vokatry ny fahatsapana ara-tsaina ny fahitana maso. Ny fifandraisan'ny loko iray amin'ny iray hafa dia miankina amin'ny endriny sy ny toerana misy azy, ny habetsany, ny toetrany ary ny fanamafisany. Azonao jerena ao amin'ny Google Books koa izany.
Teoria amin'ny sarimihetsika sy fahatsapana horonantsary avy amin'i Sergei Eisenstein
Fikarohana ny sinema ho mpanelanelana maneho hevitra misimisy kokoa ary lalina. Ahitana amin'ny Film Sense fanadihadiana momba ny filaharam-peo nataon'i Alexander Nevsky. Boky tena ilaina amin'ny kanto sinema izay ahafahan'ny olona mahazo aingam-panahy.
Etsy ankilany, Theory Film dia nosoratana teo anelanelan'ny 1928 sy 1945 ho toy ny lahatsoratra roa ambin'ny folo hanehoana hevi-dehibe amin'ny fivoaran'ny teôria sarimihetsika an'i Eisenstein ary indrindra ny famakafakana ny antonony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Boky famolavolana 5 izay tsy maintsy ananana
Te hahafantatra ny sandan'ny boky tsirairay aho
Manana azy ireo ao amin'ny Amazon ny ankamaroan'izy ireo :)
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara. Heveriko fa "adidy" koa ny manitsy ny lahatsoratra an-tsoratra (na nadika na an'ny azy). Ho fanajana ny mpamaky.
Mpidoroka tranonkala dia hoy izy:
Ny ratsy dia amin'ny teny anglisy daholo.
Mamaly amin'ny adictoWeb